Movavi Video Converter Alternative for Windows: Better, si dhakhso ah
> Resource > Windows > Movavi Video Converter Alternative for Windows
Converter video A waa aalad awood u leedahay. Waxaa jira dhowr video converters la awoodaha kala duwan iyo qaar ka mid ah loo jecel yahay sida Video Movavi ka Converter for Windows. Waxaa laga yaabaa in aad raadinayso duwan Movavi Video Converter Alternative for Windows. Sidee baad ku ogaan taas oo ugu fudud oo degdeg ah si ay u isticmaalaan? Maqaalkani waxa uu kuu sheegi doonaa qalab diinta video weyn oo gui wax ku ool ah (User Interface Graphic), iyo awoodo in ay soo saaraan video in tayo wanaagsan leh oo xawaare Hillaac.
Shaqada Converter video ah uusan ku dhamaan la diinta video iyo audio.There jira dhowr isticmaalada kale oo ka soo hadhay, kuwaas oo Converter video jeclaan u isticmaal sida gubi ah DVD, Blu Ray disc gubi, iyo editor video ah. Dadka isticmaala sare waxaa kaloo samayn kartaa hawlaha sida beddelo heerka yara iyo codecs. Wondershare Video Converter Ultimate ( version Mac la heli karo) waxay daliil u noqon kale ugu wanaagsan ee Movavi Video Converter for Windows.
Waa maxay Tani Movavi Video Converter Alternative for Windows fiican
Sida loo rogo ama la kale ayaa si Movavi Video Converter
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah faa'iidooyinka ugu sareeya ee la isticmaalayo duwan Movavi Video Converter for Windows.
Converter video Tani waa si dhakhso ah oo halka diinta hufan. Sidoo kale waxa uu samatabbixin karo xawaare Hillaac. Eeg shaashada soo socda. IT barbardhigay xawaaraha diinta ee Wondershare la converters oo weyn oo kale ah, sida ASF, Movavi, iyo Converter cyberlink. Wondershare Waxaa recoginized sida qalab ugu dhaqsiyaha badan diinta video.
2.Support More qaabab Media
Software Wondershare sida xamili karaan qaab kasta oo ka mid ah videos, sida AVI, FLV, Mpg, MP4, M4V. Waxaad sameyn kartaa in ka shaashadda in this Movavi Alternative for Windows taageerada diinta DVD, audio, video iyo image. Uma baahnid in aad walwalo arrinta qaab incompatibility ah.
3. la yaabka leh Fearures
Dhab ahaantii, Wondershare kartaan super Movavi marka ay timaado qaabab supportable iyo xawaaraha diinta. Laakiin halkan Wondershare ee sifaatka aad u sareeya ayaa sidoo kale u baahan tahay in la sheego. Waxaa la samayn karaa sida Converter a video, editor video, DVD abuure iyo video bixi. Haddii aad jeceshahay in aad DEAD macluumaad metadata si aad video ama TV show, waxa ay si guul leh u samayn karaa ,.
Sida loo rogo ama la Alternative si ay Movavi for Windows
Software Tani waxay leedahay interface ogaado. Si aan u dhammeys diinta videos, waxaad u baahan tahay oo kaliya xoogaa tallaabooyin ah.
Tallaabo 1: Ku jiid aad video galay Converter this. Function Dufcaddii diinta ayaa kuu ogolaanaysaa inaad soo dhoofsadaan ka badan hal video. Oo weliba waxa ay leedahay ma xaddidaadda size file max.
Talaabada 2: Dooro qaab wax soo saarka aad. In ay leeg- tahay qaab wax soo saarka, waxaa jira qaabab badan oo uu ka soo xusho. Haddii aad rabto in aad si loogu badalo files si iPhone ama iPad u loo maqli karo, kaliya dooran Device, ka dibna dooro qalab aad u jeclaystay sida qaab diirada.
Tallaabo 3: Ka billow si loogu badalo. Tani waa tallaabadii u dambaysay. Fadlan riix badhanka diinta si ay u sii wado. Sidoo kale si Movavi taageertaa ku milmaan diinta. Waxaad u bedeli karaan dhowr video clips ka mid ah soo galay.